Faroole oo loo jawaabay iyo xiriirka DF & Puntland oo wali mugdi hoose ku jira | raascasayrmedia.com
← Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inuusan doorasho diidanayn, balse loo baahan in laga tashado
London:Jaaliyada Raascasayr State ee UK oo Shirweyne Ku Yeeshay Magaalada London Taageerayna Dawlada Raascasayr State. →
May 1, 2011 · 1:34 am
Faroole oo loo jawaabay iyo xiriirka DF & Puntland oo wali mugdi hoose ku jira
Waxaa wali taagan khilaaf xooggan oo u dhexeeya Dowladda KMG Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedka Puntland, kaasoo in mudo ah soo jiray.
Madaxweynaha Puntland Dr. C/raxmaan Maxamuud Faroole ayaa ka dhawaajiyay in Dowladda KMG ay halis ku tahay amniga iyo nidaamka ka jira Puntland, isagoona ku eedeeyay dhibaatooyinka mudooyinkii dambe ka taagnaa deegaanada Puntland ay ka dambeyso Dowladda KMG.
Dowladda Federaalka KMG Soomaaliya ayaa iyadana jawaab kulul ka bixisay eedeynta Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Faroole u jeediyay Dowladda KMG oo uu ku tilmaamay iney qas iyo nabadgelyo xumo ka abuureyso deegaanada Puntland.
“Hadafka Dowladda KMG ah waa Nabbadeynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya, weligeedna qorshaha kuma darsan hurin colaad mana haboona in lagula soo galgasho fitnada ka taagan qeybo ka tirsan maamulada dalka ka jira ee la doonayo in damac Siyaasadeed lagu gaaro”, sidaa waxaa yiri Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Boostada C/kariim Xasan Jaamac .
Wasiirka ayaa been aan sal iyo raad laheyn ku tilmaamay in DKMG ah ay abaabusho kooxo mucaarad ah oo xasilooni darro ka abuura Puntland, balse ay jiraan kulamo ay la yeelato dhamaan qeybaha Bulshada ee gobolada Soomaaliya si buu yiri looga gacan siiyo horumarinta deegaanadooda gaar ahaan dhinacyada Sugidda amniga iyo maamul sameynta.
“Dowladda waxaa ku jira dad xilkas ah ama kuwo ka turjumaya deegaanada Puntland, marka waxaa haboon inaan eedeyn ama damac siyaasadeed lagu raadin warar aan jirin, waana xaqiiqo in kooxaha nabbad-diidka ah ee Shabaab iyo mucaaradkii Gal-gala ay lug ku leeyihiin rabshadaha ka taagan Puntland, anagoo horay ugu tacsiyeynay dadkii dhibaatadu kasoo gaartay dilalkii ka dhacay Puntland “, ayuu sii raaciyay hadalkiisa wasiirka Warfaafinta.
C/raxmaan Faroole ayaa tilmaamay in shaqsiyaad ka tirsan Dowladda oo uu sheegay iney ku fashilmeen siyaasadda dalka ay doonayaan in ey xasilooni darro ka abuuraan Puntland, hase ahaatee Madaxweyne Faroole ayaa horay nabadgelyo xumada ka jirta Puntland ku eedeeyay kooxaha ka dagaalama Koonfurta Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu Md. C/raxmaan Faroole ku eedeeyay Dowladda KMG in Jabhadda SSC ay taageero dhinac walbo ay ku bixiso sidii ay Puntland rabshado ugu abuuri lahaayeen hase ahaatee uu tilmaamay in ujeeadadii loo abuuray lagu guul dareystay.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhinaca kale ka dalbaday Baarlamaanka Soomaaliya in ay xaqiijiyaan qabsoomida doorashada bisha August lagu baaqay, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in C/raxmaan Faroole uu ku jiro damac dhinaca Madaxtinimada Soomaaliya.